Bagubhe inyanga yabesifazane | News24
Bagubhe inyanga yabesifazane
Inhlangano ezimele Izwi Lothando igubhe inyanga yabesifazane nabaholi kanye nabafundi bendawo. Kwesokunxele uSekela Nobhala wegatsha le-ANC eShakaville uMnuz Sbiliboco Khoza, uMnuz Mduduzi Dlamini, uKhansela Sdudla Mhlongo, uMiss eThekwini uNksz Nompumelelo Nkosi kanye noMnuz Phila Zulu. x
IZWI Lothando Home and Community Based Services okuyinhlangano engenzi nzuzo ihlele umcimbi wokujabulela inyanga yabantu besifazane.
Lo mcimbi ubusehholo lo mphakathi waseShakaville ngoLwesithathu oledlule.
Usihlalo wale nhlangano uMnuz Phila Zulu uthe: “Besikade sinabafundi besifazane abangenabo abazali abafunda Etshelenkosi High, Mavivane Primary, Eziphozethu Primary kanye nabaseMbozamo Primary School. Bonke labafundi banikezwe izinto zokuziphophotha kanye nezinto zokuthi bezisebenzise uma besezinsukwini zabo ukuze kuvikeleke isithunzi sabo kanye nokuzethemba kwabo ngoba abanye abafundi baze belove esikoleni uma besezinsukwini zabo ngoba bengenakho abazokusebenzisa,” kusho yena.
Isikhulumi sosuku okungumuntu wesifazane osemusha ozithobile futhi onekusasa eliqhakazile ongu-Miss eThekwini 2016 owenza izifundo zakhe zobudokotela eNyuvesi yaKwaZulu uNkosazana Nompumelelo Nkosi uyale abafundi wathi mabangazihlanganisi nezidakamizwa futhi bengazifaki ebudlelwaneni bozothando nabantu abadala, phecelezi ama blesser, ngoba bazokhulelwa bangenwe izifo bephume esikoleni kufe ikusasa labo.
Uqhube ngokuyala abantu abasha ngokuthi bengamkhohlwa uNkulunkulu kukho konke okuhle okwenzeka ezimpilweni zabo.
Uthe: “Thandaza ucele ukuthi uNkulunkunkulu akusize ufezekise amaphupho akho futhi ningakhohlwa ukuthi isinqumo osithatha namuhlanje sinomthelela kwikusasa lakho. Ngicela nifunde niphase ngiyanithanda kakhulu,” kusho uNksz Nkosi.
UNksz Mandy Makhanya naye ongumuntu wesifazane osemusha oyiphoyisa lomgwaqo KwaDukuza uyale abafundi ngobungozi bokusebenzisa izidakamizwa.
UNksz Makhanya uthe: “Bafundi ningasebenzisi izidakamizwa ngoba izidakamizwa zithikameza ukusebenza kwengqondo kanye nawo wonke nje umzimba, cabanga njengoba ninemizimba emihle kanje futhi uma uke wabanjwa nje uphethe izidakamizwa uzoboshwa bese kuba nzima ukuthola umsebenzi. Zingane zami ngiyanithanda ave nibalulekile,” kusho yena.
UMnuz Zulu utshele abafundi ukuthi bengakhohlwa ukuthi babalulekile emphakathini.
Uthe: “Bosisi nina niyizimbali zesizwe ngakho ke ngicela nifunde isikole ukuze nizophumelela empilweni, nidede kokubi nizihloniphe nina kuqala ukuze abantu bezonihloniphe njengoba niyizimbali zesizwe. Ukuze niphumelele ngicela niphile ngalezinsika ezintathu, imfundo, inhlonipho kanye noNkulunkulu,” kusho uMnuz Zulu.
Uthe imfundo ingasiza abantu abasha ukuthi bekwazi ukuvula iminyango eminingi empilweni kanti inhlonipho isiza ngokuthu umuntu aphile isikhathi eside ukuze akwazi ukufeza amaphupho akhe njengoba kusho nencwadi engcwele ukuthi izingane kumele zihloniphe abazali bazo.
Uthe: “UNkulunkulu uzofezekisa amaphupho akho akubusise aphinde akuqinise ezikhathini ezinzima empilweni ngoba okumele nikwazi futhi nikuqonde ukuthi akuhleli kumnandi empilweni ubunzima buyafika kodwa abuhlali isikhathi eside so uyamdinga kakhulu uNkulunkulu ngalezozikhathi. So zingane zami ngiyanithanda ngicela nizimisele esikoleni nifunde nihloniphe wonke umuntu,” kusho uMnuz Zulu.
Uqhube ngokubonga uKhansela Sdudla Mhlongo osuka kwihhovise likaSomlomo waKwaDukuza kanye nobuholi begatshe le-ANC eShakaville uMnuz Sbiliboco Dlamini abahambele lo mcimbi ngeledlule.
Abafisa ukuxhasa le nhlangano benga xhumana noMnuz Zulu enombolweni ethi 082 515 1701.